Maraykanka oo Ka Hadlay Duqayn uu Ka Fuliyey Duleedka Muqdisho – Radio Daljir
Agoosto 11, 2017 8:40 b 0
Taliska ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ayaa war ka soo saaray howlgal ay ka fuliyeen degaan ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho.
Warka ayaa lagu sheegay in howlgalkan lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, ayna socoto qiimeyn lagu hayo natiijada weerarka, wixii warbixin ahna ay dib ka soo sheegi doonaan.
“Mareykanka wuxuu si dhow ula shaqeyn doonaa saaxibadood Soomaaliya iyo xulafada gobolka, si loogu jebiyo Al-Shabaab, laguna soo celiyo xasilooni iyo nabadgelyo” ayaa lagu yiri Qoraalkan.
War xalay ka soo baxay Wasaaradda warfaafinta Somalia ayaa lagu sheegay in weerarkan uu ka dhacay degaan lagu magacaabo Shaashweyne oo ku yaalla duleedka Muqdisho, uuna fasaxay madaxweyne Farmaajo.
Dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka ma sheegin magaca sarkaalka ka tirsan Al-Shabaab ee lala beegsaday weerarkan balse waxay sheegeen inuu ku lug lahaa dilal iyo qaraxyo dad badan lagu laayey oo ka dhacay Muqdisho.